Global Voices teny Malagasy » Shina: Fanorisorenana ara-politika mihatra amin’ireo bilaogera mitaky ny famotsorana an’i Ilham Tohti · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Febroary 2019 8:41 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Miranah
Nanjavona nandritra ny roa herinandro mahery  ilay Profesora Uighur ao amin'ny Oniversite Minzu ao Shina sady mpanorina ny Uighurbiz, IIham Tohti.
Mihoatra ny 374 ireo sonia voaangona mitaky amin'ny governemanta Shinoa mba hamotsotra azy. Niharan'ny fanorisorenana sy nohadihadian'ny polisy ny sasany tamin'ireo olona nanao sonia ilay fanambarana, anisan'izany ilay mpanoratra Tibetana, Woeser  sy mpanoratra Miozolomana, Ismael An .
Araka ny tatitry ny RFA , natombok'i Woeser ny fanentanana fanangonan-tsonia ary nasaina “nisotrosotro dité” niaraka tamin'ny polisy izy ary haraha-maso mafy amin'izao fotoana izao.
Iray amin'ireo mpanasonia ny fanambarana ho famotsorana an'i Iham Tohti i Ismael. Vokatr'izany, dia nandondona tao am-baravarany ny polisy teo an-toerana. Talohan'ny nialany tao an-trano handeha hisotro dite, dia namoaka ny sariny tao amin'ny bilaoginy izy ary nanoratra tamin'ny teny Anglisy momba ny “fanasana hisotrosotro dite” avy amin'ny polisy :
Ismael no anarako. Miozolomana Hui, mpanoratra mahaleo tena, bilaogera ao Shina.
Sambany aho namoaka ny sariko ato anaty aterineto, angamba koa sady farany.
Hohadihadian'ny polisy Shinoa ao Jinan aho androany, hanontaniana momba ny fifandraisana amin'ny Miozolomana ao Xinjiang.
Anisan'ireo miozolomana Xinjiang ny Uighur, Kazak, ny Hui vitsy an'isa. Ao anatin'ny miozolomana Hui aho. Rahalahiko sy anabaviko amin'ny fivavahana ny Uighur. Fotoana naharitra ela no niaretan'ny Uighurs ny fampijaliana, ary nandre sy nanatri-maso tranga maro tamin'ny alalan'ny dia tao an-tanindrazako aho. Taty aoriana aho nanomboka namoaka lahatsoratra mba hitaky ny fiarovana ny miozolomana ao Xinjiang. Hatramin'ny fitroaran'ny Uighur tao Urumqi tamin'ny 5 Jolay, niezaka niaro ireo olona nampijaliana tao amin'ny tranonkala shinoa aho. Ka niantso ny raiko ny polisy shinoa mba hanakana ahy. Miezaka manampim-bava ahy. Nampibaribary ny lainga ny teniko ary nahatonga ireo Shinoa sasany tsy faly.
Tsy miloa-bava ireo olona afaka miteny ho an'ny silamo Shinoa, indrindra fa ny Arabo. Nilaza ny Hui fa taranak'ireo Arabo fahiny. Tena diso fanantenana aho satria efa nanadino antsika ny silamo Arabo. Rehefa niaro an'i palestine tao amin'ny tranonkala shinoa aho ary nanoratra tononkalo ho an'ireo mpiady palestinianina, dia tsy nieritreritra mihitsy ny fahanginanao. Amin'ny fijerin'ny “shinoa” marobe, dia mpampihorohoro sy extremista izahay satria te-hitàna ny finoana sy ny fomban-drazanay ara-kolontsaina manokana. Tsy manaiky ny sarintsariny izahay.
Ity angamba no teny farany. Ity no bilaogiko farany hany amin'ny teny anglisy. Tsy mahay teny anglisy tsara aho.
Mbola mangina ihany ireo namako sy rahalahiko, azafady. Irariako mba ho faly sy salama ianao sy ny fianakavianao
Soa ihany fa tsy nitazona azy ny polisy saingy nampitandremana izy mba tsy hanome fanehoan-kevitra betsaka mikasika ny resaka Xinjiang. Naneho ny fihetseham-pony izy tamin'ny alalan'ny tononkalo sinoa iray, Having tea (misotro dité) , tao amin'ny lahatsorany bilaogy farany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/07/134597/
 Nanjavona nandritra ny roa herinandro mahery: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2009/07/08/uighurbizcns-founder-detained
 mpanoratra Tibetana, Woeser: http://woeser.middle-way.net
 mpanoratra Miozolomana, Ismael An: http://ismaelan.blogspot.com
 namoaka ny sariny tao amin'ny bilaoginy izy ary nanoratra tamin'ny teny Anglisy momba ny “fanasana hisotrosotro dite” avy amin'ny polisy: http://ismaelan.blogspot.com/2009/07/look-your-last-on-scarlet-letter-and.html
 Having tea (misotro dité): http://ismaelan.blogspot.com/2009/07/blog-post_23.html